ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသက်တမ်းတိုးခြင်းအပေါ် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ - Xinhua News Agency
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ ကရာကက်စ်မြို့ ရှိ မဲရုံအပြင်ဘက်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် မဲစာရင်း စစ်ဆေးနေသော မဲဆန္ဒရှင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကရာကက်စ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများအား နောက်တစ်နှစ်အတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ သက်တမ်းတိုးရန် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Felix Plasencia က ရှုတ်ချကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူတွေအပေါ် ဒီထိုးနှက်မှုအသစ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်။ အခုလို ပြင်းထန်တဲ့ သက်တမ်းတိုးမှုကို ရန်လိုတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆပါတယ်” ဟု Plasencia က Twitter တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
Plasencia ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ အရေးယူမှုသည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ဒေသတွင်းနှင့် ဒေသန္တရ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အာဏာရ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်သိရသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ရန်’’ ဖြစ်ပုံရကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွင် လက်ရှိ ဒုတိယ သမ္မတ President Delcy Rodriguez ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် လက်ထောက်များ အပါအဝင် ဗင်နီဇွဲလား အရာရှိကြီး ၅၅ ဦးကို ပစ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
CARACAS, Nov. 18 (Xinhua) — Venezuelan Foreign Affairs Minister Felix Plasencia on Thursday condemned the decision by the Council of the European Union (EU) to renew sanctions against officials of the South American country for another year.
“We strongly condemn this new attack on our people and we consider this insolent renewal an act of hostility,” Plasencia said on Twitter.
According to Plasencia, the move is aimed at undermining the ruling socialist party in the lead-up to regional and local elections on Nov. 21.
The council’s objective appears to be to “torpedo the democratic celebration next Sunday,” he said.
The sanctions target 55 Venezuelan officials, including current Vice President Delcy Rodriguez, military leaders and deputies. Enditem